China Zviyo Kuchenesa Equipment Fekitori, Zviyo Kuchenesa Midziyo Mutengesi
Iyi yakakwira performance vibro separator, pamwe neiyo aspiration chiteshi kana kudzokorodza aspiration system inoshandiswa zvakanyanya muupfu zvigayo uye silos.
Ndege Rotary skrini inowanzoshandiswa pakuchenesa kana kukora mbichana zvinhu mukugaya, chikafu, mupunga wekugaya, indasitiri yemakemikari uye maindasitiri ekubvisa mafuta. Nekutsiva akasiyana meshes emasefu, inogona kuchenesa tsvina mune gorosi, chibage, mupunga, mbeu yemafuta uye zvimwe zviwanikwa zvigadzirwa.
Chidzitiro chakafara uyezve kuyerera kwakakura, kuchenesa kushanda kwakakwirira, kutenderera kutenderera kufamba kwakagadzikana neruzha ruzha. Yakashongedzerwa nechishuwo chiteshi, inoita nharaunda yakachena.
TCXT Series tubular Magnet yekuchenesa zviyo, Kubvisa simbi kusachena.
Iyo magineti yeyedu yakavimbika dhirowa magineti inogadzirwa neakakwira kuita kusingawanzo pasi kusingagumi magineti zvinhu. Saka chishandiso ichi chikuru simbi inobvisa muchina wemaindasitiri senge chikafu, mushonga, zvemagetsi, zvedongo, kemikari, zvichingodaro.
Muchina uyu unoshandiswa kumusoro kwesiro kubviswa kweguruva uye diki mweya vhoriyamu imwechete poindi kubvisa guruva.Iyo inoshandiswa zvakanyanya muupfu zvigayo, matura uye michini zviyo madepoti.
Hupfu chigayo michina-TSYZ Series kumanikidza dampener inoita basa rakakosha mugorosi mwando murau panguva yekuita yekuchenesa gorosi mumafurawa zvigayo.
Iyo Inodzvinyirira Dampener ndiyo hombe midziyo yegorosi yemvura murau muchiitiko chegorosi kuchenesa muupfu zvigayo.Iyo inogona kudzikamisa huwandu hwegorosi kudzikisira, kuverengera kudzikiswa kwezviyo zvegorosi zvakaenzana, kunatsiridza kukuya kuita, kunatsiridza kuomarara kwe bran, kuderedza endosperm simba uye kudzikisa kunamatira kwe bran uye endosperm iyo inobatsira kugadzirisa kugona kwekukuya uye hupfu sieving.Pasipo, zvinobatsira kugadzirisa poda goho uye pingi mhando. Muchina une zvakanakira yakakwira kuburitsa, yakaderera simba kudyiwa, kurema uremu, yakakwira dampening vhoriyamu, homogeneous dampening, yakagadzikana uye yakavimbika uye yakaderera gorosi kupwanya chiyero. Mukuita kwekudzikira kugorosi inoita basa rekuchenesa.Iyo inokodzera shanduko yehunyanzvi mune hombe, yepakati uye diki furawa chigayo uye kusarudzwa kweiyo itsva hupfu zvigayo.
Mushini wechibage unodzikira, Wakashongedzerwa nemaitiro akati wandei epamberi, uchienzanisa nemuchina wakafanana kubva mhiri kwemakungwa, MLT akateedzana e degerminator anoratidza kuve akanakisa mukubvisa uye kuita-kumera maitiro.
Iyo mhepo-yekudzokesa zvakare aspirator inonyanyoshandiswa kune granular zvinhu zvekuchenesa mukuchengetedza gorosi, furawa, chikafu, mishonga, mafuta, chikafu, kubika uye mamwe maindasitiri Iyo mhepo-yekudzokesa zvakare aspirator inogona kupatsanura yakaderera huwandu hwesvina uye granular zvinhu (senge gorosi, bhari, paddy, mafuta, chibage, nezvimwewo) kubva kuzviyo. Iyo mweya-yekudzokesa zvakare aspirator inotora yakavharwa kutenderera mweya fomu, saka muchina pachawo une basa rekubvisa guruva. Izvi zvinogona kuponesa mimwe michina yekubvisa guruva. Uye nekuda kwayo haina kuchinjanisa mweya nenyika yekunze, saka, inogona kudzivirira kurasikirwa kwekupisa, uye isingasvibise nharaunda.
Iyo yakatwasuka scourer inowanzo shanda pamwe neayo aspiration chiteshi kana yekudzokesa zvakare aspiration chiteshi panzvimbo yayo. Ivo vanokwanisa kunyatsobvisa yakadzvanywa yegobvu inorema kana ivhu revhu kubva pazviyo.